संसदमा प्रस्तुत विधेयकका विरुद्ध माफियाहरु सकृय — Motivatenews.Com
काठमाडौँ – शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा अपारदर्शी लगानी र सिन्डिकेट कायम राख्न केही शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायीहरु सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधयेक बिरुद्ध अभियान सुरु गरेका छन् । अपारदर्शी लगानी र चोरबाटोबाट विदेश लगानी ल्याएर शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा एक छत्र राज गरीरहेका भारतीय र अन्य देशका माफियाहरुले आर्थिक प्रलोभन सहित चलखेल सुरु गरेका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानीलाई थप पारदर्शी बनाउनका लागि २२ फागुन २०७५ मा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक –२०७५’ प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि सरकारले यो विधयेक ल्याएको हो ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा आफ्नो साम्राज्य कायम राख्नका लागि उनी यो विधेयक बिरुद्ध उभिएका हुन् । यो विधयेक पारित भएपछि नेपालमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न चाहने विदेशी साझेदारले न्युनतम ५० लाख रुपैंया लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरु सरकारी नियमन र राजस्वमा आउछन् । तर, केही व्यवसायीहरु भने शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडिआइ० नै पूर्ण रुपले रोक्नुपर्ने भन्दै आर्थिक चलखेल सहित अभियानमा छन् ।
एफडिआइको बिरोध किन ?
पछिल्लो समयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय निकै ठुलो आर्थिक कारोबार हुने व्यवसायको रुपमा स्थापित छ । तर, यसको नियमन र कानुनी व्यबस्थापन नहुँदा राज्यले मासिक करोडौं राजस्व गुमाईरहेको छ । विदेशी शैक्षिक माफियाहरुले नेपाली एजेन्ट खोजेर लगानी गरेका छन् । उनीहरुले राजस्व बुझाउन छोडेर नेपाली ऐजेन्टलाई निश्चित रकम दिने गरेका छन् । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक –२०७५’ पारित भए यो बन्द हुनेछ ।
अष्ट्रेलियनहरुको लगानी रहेको एइसिसि ग्लोबल र इन्टरफेस, भारतीयहरुको लगानी रहेको ग्लोबल रिच लगायतका शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुले यो विधयेक बिरुद्ध छ । चोरबाटो र अपारदर्शी हिसाबले काम गरीरहेकाहरुको आफ्नो पुरानो साम्राज्य गुम्ने त्रासले यस्तो अभियान चलाएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
विधेयकको व्यवस्था अनुसार ५० हजार डलर ९५० लाख रुपैंया० लगानी नभएका विदेशी परामर्श व्यवसायीहरुले नेपालमा सेवा दिन नसक्दैनन् । विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा तोकिए पनि विदेशी अधिकतम सीमा भने नतोकिने विधेयकको दफा १३ मा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयदेखि संसदहरुमा लबिङ्ग
स्रोतका अनुसार उनीहरुले यो विधयेकलाई आफू अनुकुल बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नै चलखेल गरेका थिए । केहीलाई प्रभावमा पारेर उनीहरुले अनुकुल बनाएका थिए । तर, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विधेयकलाई देशको समृद्धिका लागि अनुकुल बनाउने भन्दै परिमार्जन गरेका थिए ।
मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा पुगेपछि शैक्षिक माफियाहरुको योजनामा यो बिरुद्ध संशोधन हाल्नका निम्ती उनीहरुले संसदको घर दैलोमा गएका थिए । आर्थिक प्रलोभन सहित उनीहरु सक्रिय रहेको एक सांसदले बताए । सत्तारुढ दल नेकपाका ती सांसदले भने, ‘यो बिधेयक बिरुद्ध संशोधन दर्ता हालीदिनहोस् । हामी तपाईले भने जति नै आर्थिक व्यबस्थापन गर्छौं भन्दै आएका थिए । तर, देशको समृद्धि बिरोधी त्यो प्रस्ताव मान्ने कुरै भएन ।’
विधेयक संशोधनको लागि २५ फागुन २०७५ दिनको ठिक २ : १५ बजेसम्म तोकिएको छ । स्रोतका अनुसार भारतीयहरुले तयार पारेको रेडिमेड संशोधन विधयेक बोकेर उनीहरु संसदहरुको दौडिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार रेडिमेड संशोधन विधयेक उनीहरुले बिभिन्न सांसदहरुलाई दिएका छन् । तर, देशको समृद्धिसँग जोडिएको लगानीलाई प्रभावित पार्ने गरी तयार पारिएको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन संसदहरुले रुची देखाएका छैनन् ।
माफियाहरुको रुची किन ?
यो विधयेक पारित भएपछि नेपालमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न चाहने विदेशी साझेदारले न्युनतम ५० लाख रुपैंया लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो प्राबधान लागु भए लगानीकर्ताहरु सरकारले तय गरेको बाटो भएर आउन पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको जस्तो मनपरी लगानी बन्देज हुन्छ । तर, माफियाहरुले भने विदेशी लगानी नै बन्द गर्नुपने बाध्यकारी नीति बनाउने योजनामा छन् । यदि त्यसो भए भारतीय र अन्य लगानीकर्ताहरु दोस्रोबाटो भएर आउनेछन् । दोस्रोबाट भएर आउदा देशले अरबौं राजस्व गुमाउनेछ ।
लगानी सम्मेलन नै प्रभाव पार्ने योजना
सरकारले वैदेशिक लगानी जुटाउन आउँदो चैत १५–१६ मा काठमाडौंमा ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ गर्न लागेको छ । मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु पर्याप्त भएपनि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि आवश्यक देखिएकाले लगानी सम्मेलन गर्नु परेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
यो सम्मेलनलाई थप उपलब्धी मुलक बनाउन सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक –२०७५’ पाश गर्न लागेको हो । तर, ती व्यवासयीहरुल भने लगानी सम्मेलनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी अभियान चलाएका छन् ।
लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना र निजी क्षेत्रको सह–आयोजनामा सम्मेलन हुदैछ । तर, उनीहरुले भने आफू प्रभावशाली नेता निकट रहेको भन्दै विधेयकलाई असफल बनाउन लागेका छन् ।
२०७५ फागुन २५ गते प्रकाशित
कन्सल्टेन्सी चर्चा सम्बन्धित
फेकनको सक्रियतामा १ सय २५ जनाले लगाए कोरोना खोप
निमासको १३ औँ बार्षिकोत्सव भव्य रुपमा सम्पन्न
नेपालमा आयो विश्वकै उत्कृष्ट कन्सल्टेन्सी, विद्यार्थीलाई सुनौलो अवसर
फुटको संघारमा AAERI NEPAL
इक्यानियनहरुलाई खुशीको खबर, अब विना व्याज १५ लाखसम्म ऋण पाइने